« Akom-pahatsiarovana » – Tsiahy ho an’i Jérôme Randria hiarahana amin’ ireo mpanakanto tanora - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
« Akom-pahatsiarovana » – Tsiahy ho an’i Jérôme Randria hiarahana amin’ ireo mpanakanto tanora
Mpanakanto nanana ny lazany fahizay i Jérôme Randria
Tsy mba maty ny mpanakanto satria ny vatan-tenany no mandao fa ny sanganasany mipetraka hatrany. Hotsaroana amin’ity taona ity ny faha-80 taonan’i Jérôme Randria, mpanakanto mpihira sy mpamorona anisan’ireo sangany sy nalaza tamin’ny taona 60. Ho fahatsiarovana izany, dia hotanterahina etsy amin’ny CC Esca Antanimena, ny alahady 26 aogositra izao amin’ny 3 ora tolakandro ny «Akom-pahatsiarovana», seho tsiahy an’i Jérôme Randria, ka hiarahana amin’ireo mpanakanto tanora sy efa fantatra amin’ny fiangaliana ireo kalon’ny fahiny. Ao anatin’izany ry Lily, Luk, Sitraka, Mahery ary Gothlieb. Hanatevin-daharana azy ireo koa anefa i Railôla, zanak’i Jérôme Randria.
Manodidina ny 40 ireo hiran’ity mpanakanto ity no hokaloina mandritra ny fampisehoana, ankoatra ireo hira nomeny noventesin’ireo tarika hafa toy ny «hirahiram-poko», «Ny foko tia», «Bao», «Veloma namako»… izay niangalin-dry Vola sy Noro, Railovy… Tsy ho latsa-danja koa anefa ireo hira nokaloiny toy ny «Rômy», «Alina Paris», «Vonoy ny anarako»…
«Tsy nisy ny fanovana teo amin’ny fandrindrana ny hira fa ezahina hotazonina araka ny nandrindran’i Jérôme Randria azy ihany», araka ny fanamarihana nentin’ny Pro Système, mpikarakara ny fampisehoana. Tafiditra ao anatin’ny «Akom-pahatsiarovana» ihany koa ny rakikira sy rakitsary ary boky mirakitra ny tantaran’i Jérôme Randria.
Fahatsiarovana, Mpanoratra Rijakely, 07.08.2012, 09:31	FIARAHAMONINA